फिफा विश्वकप २०१८ को ट्रफीको यात्रा सुरु::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
फिफा विश्वकप २०१८ को ट्रफीको यात्रा सुरु
एजेन्सी – फिफा विश्वकप २०१८ को ट्रफीको यात्रा सुरु फिफा विश्वकप २०१८ को ट्रफीको टुर सुरु भएको छ । विश्वकप २०१८ को संस्करण जुन १४ बाट रसियामा सुरु हुँदै छ ।
विश्वकप २०१८को ट्रफी टुर कोकाकोलाले आयोजना गर्दै आएको छ । यसको सुरुवात गत ९ सेप्टेम्बर २०१७ देखि रसियाको मस्को लुजिन्की स्टेडिएमबाट सुरु भएको थियो । यो ट्रफीलाई रसियन लिगको सुरुवातको अवसर पारेर फिफाका अध्यक्ष जियानी इन्फेन्टीनो र रियन राष्ट्रपति भ्लादिमर पुटिनले संयुक्त रुपमा गरेका थिए । यो ट्रफीलाई विश्वका ५४ देशमा भ्रमण गराईने छ । सन् २०१८को सुरुवातसँगै श्रीलंकाको कोलम्बो पुर्याइएको यो ट्रफी पाकिस्तान र चीनमा समेत पुर्याइने छ ।
सन् २००६ देखि कोकाकोलाले फिफासँग लामो सम्झौता गरेर यो अभुतपूर्व ट्रफीको विश्वयात्राको सुरुवात गरेको हो । यो सक्कली ट्रफीको यात्रा कोकाकोलाले जर्मनीमा भएको विश्वकप २००६ बाट सुरु गरेको थियो । त्यति बेला यो ट्रफीलाई ३ महिना भित्र विश्वका ३१ देशमा पुर्याइएको थियो । जसलाई विश्वका लाखौैं फुटवल प्रेमीले प्रत्यक्ष रुपमा देख्ने अवसर पाएका थिए ।
सन् २०१० मा साउथ अफ्रिकामा भएको विश्व कपमा दिइएको ट्रफीलाई विश्वको ८४ देशमा पुर्याइएको थियो । त्यसमा ५० वटा अफ्रिकी मुलुकहरु समेत रहेका थिए ।अहिलेसम्मकै धेरै देशमा भ्रमण गराईएको विश्वकप ट्रफी २०१४ ब्राजिल विश्वकपको हो । त्यतिबेला १० औं लाख फुटबलप्रेमिले यसलाई नजिकबाट नियाल्ने मौका पाएका थिए । त्यति बेला नेपाली फुटबलप्रेमीले समेत ट्रफीलाई प्रत्यक्ष देख्न अवसर पाएका थिए ।
त्यतिबेला सन् २०१३ को डिसेम्बर २१ मा भुटानबाट ट्रफीलाई नेपाल ल्याइएको थियो । त्यसलाई नेपाल ल्याउन कोकाकोलाले एन्फासँग सहकार्य गरेको थियो । काठमाडौंको दशरथ रंगशालामा सार्वजनिक गरिएको ट्रफीलाई तात्कालीन नेपालका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सार्वजनिक गर्नु भएको थियो । जहाँ ७५०० भाग्यमानि फुटबल प्रेमीले यसलाई नजिकबाट नियाल्ने मौका पाएका थिए ।
किक बक्सिङ प्रतियोगिता सम्पन्न भएपछि महर्जनलाई धन्यावाद प्रदान
दोस्रो वीर गणेशमान सिंह स्मृति राष्ट्रिय खुल्ला किक बक्सिङ प्रतियोगितामा सेनाको बर्चस्व
वीर गणेशमानलाई सम्झनामा किक बक्सिङ ललितपुरमा प्रतियोगिता हुने
भिल्लारियललाई हराउँदै बार्सिलोना अगाडी
कराते च्याम्पियनसिपको १५औँ प्रतियोगितामा भाग लिन महर्जनको नेतृत्वको टोलि इण्डोनेसिया प्रस्थान